प्रहरीलाई लखेट्दा रमाईलो लाग्थ्यो ! सुनिल प्रजापति, मेयर-भक्तपुर नगरपालिका - प्रहरीलाई लखेट्दा रमाईलो लाग्थ्यो ! सुनिल प्रजापति, मेयर-भक्तपुर नगरपालिका
२०७४, २४ जेठ, 11:57:29 AM
भक्तपुर नगरपालिकालाई पर्यटकीय शहरका रुपमा चिनाइने छ
नेपाली राजनीतिमा लामो अनुभव बोकेका सुनिल प्रजापति हालैमात्र भक्तपुर नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका छन् । उनी कक्षा ४ देखि नै राजनीतिमा रुचि राख्दै २०३६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र जनमतसङ्ग्रहमा बहुदलको पक्षमा प्रतिबद्धताका साथ सरिक भएका थिए । माता कृष्णमाया प्रजापति र पिता बद्री प्रजापतिका सुपुत्र सुनिल प्रजापतिको जन्म वि.सं.२०२१ साल असार १० गते भक्तपुरको जेंला टोलमा भएको हो । कानुनमा स्नातक प्रजापतिसँग कानुन व्यवसायीको पनि अनुभव छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको केन्द्रिय सचिवबाट राजिनामा दिई स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएका प्रजापति जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि श्रीमान श्रीमतीले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु हुंदैन, छोरा छोरीको भविश्य कै लागि पनि परिवार टुक्रिन हुन्न भन्ने सिद्धान्तलाई आफुले वकालती पेशाकै क्रममा पनि धेरैको घर मिलाउने र जोगाउनमै प्राथमिकता दिएको बताउछन् । भक्तपुरको किसान परिवारमा जन्मिएका प्रजापति वर्ग र वर्गसङ्घर्षलाई हेर्ने आफ्नो व्यापक माक्र्सवादी दृष्टिकोणको कारण देश र जनताका पक्षधर मजदुर, किसान, व्यापारी, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूबीच निकै लोकप्रिय छन् । समाजमा धनीले जहिले पनि गरीबलाई दुख दिन्छ र त्यसलाई चिर्नका लागि वर्ग संघर्ष गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता, सोच र चिन्तन सानैदेखि भएबाट साम्यबाद तिर उन्मुख हुंदै राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताउने प्रजापतिको अवको चिन्तन झक्तपुर नगरपालिकालाई तीनै शहर मध्य साँस्कृतिक रुपले धनी र नमुना शहर बनाउने अभियानको रुपमा छिट्टै थालनी गर्ने दावी गर्छन् । प्रस्तुत छ यी यस्तै विषयलाई लिएर नेपालबहस डटकमका लागि पत्रकार मीरा राजभण्डारीले लिएको अन्र्तवाताको सम्पादित अंश ।
ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नगर भक्तपुरको मेयर पदमा विजयी हुनभएकोमा कस्तो लागि रहेको छ ?
आफ्नै जन्मथलोको मेयर बनेर देशको र आफनो जिल्लाको सेवा गर्ने मौका दिनु भएकोमा भक्तपुर निवासी सवै जनता प्रति आभारी छु । इतिहास, संस्कृति र पर्यटनको धनी भक्तपुरको मेयरको हैसियतले काम गर्न पाउंदा थप उत्साह प्राप्त भएको छ ।
आफ्नो राजनैतिक जीवनको बारेमा बताई दिनुस न ?
यो रोचक छ । हामी निकै साना थियौं । हामा्र अग्रज दाजुहरुको पछि लागेर राजनैतिक चेतनामुलक कार्यक्रममा जान्थ्यौ । त्यहां हामीलाई चीनको राजनैतिक व्यवस्था र त्यसका संबाहकहरुको बारेमा चित्रहरु देखाईन्थ्यो । चीन सचित्र सोभियत भुमी जस्ता पत्रिकाहरुबाट त्यहांको राजनैतिक अवस्था बुझने अवसर मिल्यो । दाईहरुको पछि लागेर आन्दोलन जुलुशमा हुन्थ्यौं । त्यहां धेरै कुरा देख्थ्यौ । प्रहरीले कुटेको, प्रहरीलाई लखेटेको आदि । प्रहरीलाई लखेट्दा रमाईलो लाग्थ्यो । पछि नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन मार्फत राजनीतिमा प्रवेश गरियो । पंचायतकालीन भुमिगत राजनीति थियो । बडो मुस्किल थियो बचेर हिड्न । पछि २०३६ सालको बहुदलको लागि भएको आन्दोलनमा सक्रियतापुर्वक लागियो । सानै देखि हाम्रा अग्रज दाईहरुले समाजमा धनीले जहिले पनि गरीबलाई हेप्छन् । तसर्थ त्यसबाट उन्मुक्तिका लागि वर्गसंघर्ष गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता सानै देखि रह्यो र कम्युनिज्म तिर बढी आस्था रह्यो । कलेज पढ्दा पनि न्यायाधिशका छोरा लगायत धनीका छोरा छोरीहरुले हेप्थे । त्यसैको प्रतिफलको रुपमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा सलग्न रहेर राजनीति गरे । साथमा वकालती र शिक्षण पेशामा पनि संलग्न रहे ।
विद्यार्थीकालमा राजनीति हुदै शिक्षण पेशा र वकालती पेशा गर्नु भयो । मुलधारको राजनीतिमा फेरी कैले आउनु भो ?
२०३४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव थियो । तात्कालिन भक्तपुर नगरपंचायत अन्र्तगत वडा नं २ वाट वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिएं र निर्विरोध निर्वाचित भए । यसरी शिक्षकबाट राजिनामा दिएर फेरी मुलधारको राजनीतिमा मेरो सक्रियता रह्यो ।
पंचायतकालीन अधिनायकवादको शासन व्यवस्थामा कम्युनिष्ट राजनीतिको अवस्था कस्तो थियो ?
निकै गा¥हो अवस्था थियो । भुमिगत राजनीतिको अवस्था थियो । कम्युनिष्टप्रति राज्यको बक्रदृष्टि त थियो नै त्यसमाथि २०४५ साल भदौ ९ गते भक्तपुरमा एउटा ठुलो घटना घटयो । जसलाई भक्तपुरकाण्डको नामले चिनिन्छ । तत्कालीन राष्ट्रिय पंचायतका सदस्य कर्ण ह्योजुको हत्या भयो । र दोष मजदुर किसान पार्टी माथि लाग्यो । अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे रोहित र म लगायत १६ जनालाई सर्वस्व सहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो र ६७ जनालाई ज्यान मुद्धा लगाईयो तथा ३०० जनालाई शान्ति सुरक्षा खलल गरेको अभियोगमा थुनियो । वास्तवमा २०४५ साल भदौ ५ गतेको महाभुकम्पका पिडितहरुलाई राहत बाड्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै आक्रोसित भिडले उहांमाथि आत्रमmण गरेको हो । पंचायत सरकारलाई मजदुर किसान पार्टीका नेतृत्वहरुमाथि दमन गर्न निहु चाहिएको थियो । यस घटनालाई उनीहरुले प्रयोग गरे । हाम्रो न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेको थियो । हामीलाई या त मृत्युदण्ड हुन्थ्यो या त जेलमै मथ्र्यौ । परिवर्तन नआई केही हुदैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेको अवस्था थियो । त्यसैबेला २०४६ सालको जनआन्दोलन भयो । प्रजातन्त्र पुर्नबहाली पछि हामी जेल मुक्त भयौं, २०४७ साल बैशाख ५ गते । आम जनतालाई टाठाबाठाले कसरी फसाउंछ भन्ने थाहा पाईयो । त्यसैले जेलमुक्त भए पश्चात फेरी वकालती पेशा थाले । यो आन्दोलनमा भक्तपुरका थुप्रै युवा गोलीको शिकार भए । फागुन ८ गते चलेको गोलीकाण्डमा थुप्रै युवा गुमायो भक्तपुरले । अहिले पनि फागुन ८ गते सहिद दिवस मनाउने गरिएको छ भक्तपुरमा । तर पछि के घर जग्गाको मुद्धा मात्र हेर्छौ । देशकै मुद्धा हेर्नु पर्छ भन्दै पार्टीले भनेपछि राजनीतिमा सक्रिय रहें । २०४९ सालमा स्थानीय तहको चुनाव भयो, त्यसमा निर्विरोध निर्वाचित भएं । त्यस्तै २०५४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा फेरी वडा अध्यक्ष लडें र निर्वाचित भएं । यसरी ३ पटक वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएं । २०५५ सालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तेश्रो महाधिवेशन भयो । त्यसमा म केन्द्रिय सदस्य निर्वाचित भए । ५६ सालमा संसदको चुनावमा भक्तपुर क्षेत्र नं २ वाट सांसद उठें तर केही मतले हारें । २०५९ सालमा राजाले कु गरेपछि जनआन्दोलको माहौल बन्दै गयो । जनआन्दोलनको नेर्तृत्वको जिम्मा मलाई पार्टीले दियो । जनआन्दोलन संचालक समितिको केन्द्रिय सदस्य बनेर जनआन्दोलनको नेतृत्व गरें । २०६२ साल बैशाख ११ गते संसद पुर्नबहाली भयो । त्यसपछि अन्तरिम संविधान निमार्ण गर्नका लागि पार्टीबाट मलाई अन्तरिम संविधान निमार्ण समितिमा छनौट गरियो । नेपालको सवैभन्दा समावेशी संविधान बनाउने मौका मलाई मिल्यो । संविधान मस्यौदा समितिको १६ जना मध्यमा । ०६३ साल माघ १ गते संविधान घोषणा भए लगत्तै पाटीले मलाई सांसदमा मनोनित ग¥यो । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सर्वाधिक मत प्राप्त भएको छ । स्थानीय तहको सरकारलाई नियम कानुन बनाउने सवै अधिकार हुन्छ ।
यो निर्वाचनमा सवै भन्दा बढी मत २५७३० मत ल्याई आफु विजयी भएकोमा र प्यानलै विजय भएको मजदुर किसान पार्टीको विजयलाई कसरी हेरीरहनु भएको छ ।
हाम्रो विजयको कारण आमजनताको विश्वास र भावना हो जस्तो लाग्छ । हामी सपना देखाउंदैनौ । ढांट्ने काम पनि गर्दैनौ । दिएको बचन पुरा गर्ने पार्टीको संस्कार भएकै कारण आमजनताले हामीलाई विश्वास गरेको हो जस्तो लाग्छ । भोज भतेर गरेर भोट बटुल्ने काम हामीबाट भएन । तर फेरी पनि जनताले हामीमाथि विश्वास गरे । राजनीतिमा जित्नको लागि छलछाम भन्दा पनि आमजनताको भावना अनुरुप काम गरेमा जनताले पार्टी भन्दा पनि सो पार्टीको कामको मुल्यांकन गर्ने गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र संस्कार हो । विचार, सिद्धान्त र आस्थाको राजनीति हो हाम्रा,े हामी ठुला आश्वासन पनि दिंदैनौ र पक्षपात भेदभाव पनि गर्दैनौ । हामीले उम्मेदवारी दिने वित्तिकै आमजनताको माहौलमा नेमकिपाले जित्छ भन्ने माहौल बनिसकेको थियो । मात्र कति मत पाउने भन्ने अनुमानमा लाग्यौ । हाम्रो अनुमान अन्य सवै पार्टीको ३० प्रतिशत हाम्रो ७० प्रतिशत भन्ने थियो तर हामीले ६४ प्रतिशत मत प्राप्त ग¥यौं । यो राम्रो मत हो ।
स्थानीय निकायको लागि के कस्ता अधिकार प्राप्त छन् ?
स्थानीय तहका लागि आवश्यक नियम कानुन बनाउने हामीलाई अधिकार छ । यो संविधान प्रद्धत अधिकार हो ।
सांस्कृतिक दृष्टिले अनुपम मानिने भक्तपुरको विकासका लागि तपाईको नीति तथा कार्यक्रम केके छन् ?
हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने छौ । र सो कार्यान्वन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्छौ । हाम्रो घोषणापत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगारी, कला संस्कृति र पर्यटन, वातावरण खेलकुद तथा कृषितथा जनजिविका लगायतका १० बुंदे घोषणा पत्र जारी गरेका छौं । त्यसैमा आधारित भएर हामी नीति तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनको तहमा ल्याउंछौ । विगतमा पनि एक घर एक स्नातकको अभियान थालेको थियो नगरपालिकाले । अहिले भक्तपुरमा प्रत्येक घरमा कम्तिमा एक जना स्नातक छन् । अहिले शिक्षा नीति लगायतका १० बुंदे नीतिमा भक्तपुर नगरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्ने, ख्वप विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने, २५ शैयाको ख्वप अस्पताललाई व्यवस्थित गर्ने, युवाहरुलाई विभिन्न विदेशी भाषाको तालिम दिने, काष्ठकला, मुर्तिकला, हस्तकलाको प्रवद्धर्न गर्ने, दरवार क्षेत्रको ऐतिहासिक ९९ सय चोकको उत्खनन् गर्ने, पर्यटन उद्योगलाई प्रवद्धन गर्ने, भक्तपुरको जात्रा पर्वहरुको भौतिकवादी व्याख्यासहित अभिलेख तयार गर्ने, हनुमान घाट र कालीघाट लगायत घाटहरु सफा गरी संरक्षण गर्ने, प्रत्यक वर्ष अन्तर नगर खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने, भुकम्प जोखिम न्युनिकरणका भवन निर्माण गर्ने, डकर्मी सिकर्मी तथा घर धनीलाई समेत तालिम दिने तथा वडावडामा शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गर्ने लगायतका सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटन नीतिहरु हम्रो घोषणा पत्रमा छन् । सोही अनुरुप पांच वर्षमा पुरा गर्ने लक्ष छ । अहिले पनि ६ वटा शिशु स्याहार केन्द्र नगरपालिकाको मातहत संचालित छन् । ६ वटा कलेज छन् । जुन नगरपालिकाकै स्वामित्वमा संचालित छन् । अन्य प्राइभेट कलेज स्कुलको दांजोमा निकै सस्तो छ । ख्वप इन्जिीनियरिंग कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिंग लगायत कलेजको शुल्क निकै कम छ ।
अहिले त दिगो विकासको लक्ष्यको नारा पनि विश्वमा चलि रहेको छ । त्यही अनुरुप देशहरुले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आईपरेको छ । खासमा विकासको आधार विन्दु के होला नेपालको सन्र्दभमा ?
विकासको सवैभन्दा पहिलो आधार शिक्षा हो । शिक्षामा पहुंच सवै वर्गको हुन आवश्यक छ । जहां शिक्षा सहज रुपमा प्राप्त हुन्छ त्यहांको समाज अगाडी बढ्छ । भक्तपुर पहिले शिक्षामा निकै पछाडी थियो । २०५८ सालमा एक घर एक स्नातक भनि गरेको घोषणा र त्यसको कार्यान्वयनले अहिले प्रत्येक घरमा स्नातकहरुको बोलवाला छ । त्यस्तै प्राविधिक सीप र रोजगारीको सुनिश्चतता जस्ता आधारभुत पक्ष हुन जसले गरीवी हटाउन र युवाहरु विदेश पलायन हुनबाट रोक लगाउंछ विस्तारै । त्यस्तै स्वास्थ्य उपचारमाथिको पहुंच लगायत हिंसारहित समाजको अवतरणले विकासका हरेक अवयवहरु सुनिश्चत हुन्छन् । हाम्रो नीति अनुरुप शिक्षालाई सस्तो र सहज बनाई दिंदा अहिले धेरै इन्जिीनियरहरु उत्पादन भई सकेका छन् ।
सामाजिक न्यायका हकमा तपाईहरुको कार्यक्रम के के छन् ?
मलाई लाग्छ, हामीले कुनै ठुलो आंकंक्षा राख्न जरुरी छैन । भएका श्रोत साधनलाई नै मितव्ययी र सदुपयोग गरी न्याय र समानताको आधारमा विभेद नगरी बांड फांड गर्न सक्यौं भने सामाजिक न्याय र समानता सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । समाज अहिले प्रगतितिर उन्मुख हुंदै छन् । केटाकेटी र जेष्ठ नागरिकहरुलाई समय दिन सक्ने अवस्था कमाउने उमेरका जमातलाई कम छ । तर परिवार चलाउन र देशको विकासका लागि यो वर्ग क्रिम वा लुव्रिकेन्टको रुपमा छन् । यिनिहरुलाई व्यवसायिकतामा केन्द्रित हुन दिन आवश्यक छ । यी सवै व्यबहारिकतालाई मध्य नजर गरी हामीले जेष्ठ नागरिकको स्याहार र मनोरञ्नका लागि आदर निकेतन तथा शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना लगायतका अवधारणा ल्याउंदै छौ । जेष्ठ नागरिक तथा वालवालिका एकै ठाउंमा मनोरञ्जन गर्ने, टिभी हेर्ने लगायतका घरेलु वातावरण त्यहां हुने छ । जसमा नानीहरुले एउटा पारिवारिक वातावरण समेत प्राप्त गर्ने माहौल बन्ने छ ।
ख्वप विश्वविद्ययालय स्थापना गर्ने योजनाको बारेमा बताई दिनुस्न ?
अवको हाम्रो अभियान ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना पनि प्राथमिकतामा रहने छ । आवश्यक प्रक्रिया पुरा भई संसदमा पुगिसकेको अवस्था छ । जसमा मेडिकल पढ्नका लागि अहिले बजारमा चलेको शुल्क भन्दा पचास प्रतिशत कम लिने छांै । हाम्रो आफनै जग्गा छ । घर भाडा र जग्गा भाडा हामी लिंदैनौ । त्यसैले सस्तो गरे पनि हामीलाई घाटा छैन किनकि नाफा लिने हाम्रो उदेश्य होईन ।
अहिले मातृभाषामा शिक्षाको नारा छ, नगरपालिका र तपाईहरुको पार्टीको योजना के छ ?
भक्तपुर नगरपालिकामा धेरै पहिले देखि नै सरकारी कामकाजको भाषा नेवारी पनि रहेको छ । यहां त्यसको कार्यान्वयनमा कहिले विरोध भएन । नेवारको बाहुल्यता रहेतापनि यहां सवै समुदायमा एक अर्काको अस्तित्वलाई स्विकार्ने संस्कार छ । बजारमा जानुस यहां अन्य समुदायले पनि नेवारी भाषा प्रयोग गरी रहेको भेटिन्छ । भाषिक विकासका लागि नेवारी रञ्जना लिपि सिकाउन वाह्य जिल्लामा पनि सहजकर्ताहरुलाई यो नगरपालिकाले पठाउने गरेको छ । अव रह्यो मातृभाषमा शिक्षाको सन्र्दभ त्यसको लागि हामी परामर्शकै तहमा छौं ।
भक्तपुरको सांस्कृतिक विकास र जर्गेना गर्न के कस्ता कार्यक्रम छन् तपाईको ?
नगरपालिकाले जहिले पनि भाषा संस्कृतिको विकास र जर्गेनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसलाई हामी अझै परिस्कृत गर्दै निरन्तरता दिने छौ । टोल टोलका मन्दिरमा हुने भजन, नांच, जात्रा पर्व आदिलाई आर्थिक सहयोग दिने काम नगरपालिकाले निरन्तर गर्दै आएको छ । तर अव जोगाएर मात्र भएन त्यसमा समर्पितहरुलाई जिविकोपार्जन गर्न समेत ती त्यस्ता जात्रा पर्वलाई व्यवसायिकरण गर्ने तर्फ हाम्रो योजना छ । पर्यटन हाम्रो आर्थिक श्रोत र पहिचानलाई समेत निरन्तरता दिने आधार हो । देश विदेशमा हाम्रो पहिचानको अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्न र पर्यटनमा वृद्धि गर्न सवै भन्दा पहिले संस्कृतिको विकास र जर्गेना गर्न अवश्यक छ ।
हाल भक्तपुर नगरपालिकाले खेपिरहेको चुनौति के–के हुन ? त्यसको निराकरणका लागि तपाईको योजना के छ ?
अहिलेको समस्या भनेको खानेपानीको पर्याप्तता, हनुमन्ते खोलालाई प्रदुषणरहित बनाउने र भुकम्पबाट क्रमस भग्नावषेशमा परिणत हुन लागेको सांस्कृतिक तथा भौतिक सम्पदाको संरक्षण र पुनः निर्माण गर्ने हो । साथै भुकम्पबाट घरबास गुमाएकाहरुको पुर्नस्थापना तथा पुर्न निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गराउन पनि चुनौतिपुर्ण नै छ । कतिपयका घरका लालपुर्जा समेत छैनन जसले गर्दा पुर्ननिमार्णका कार्यमा असर परिरहेको छ । उनीहरुका लागि पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा होमवर्क भईरहेको छ । दरवार क्षेत्रका सांस्कृतिक सम्पदालाई पुनःनिमाण गर्न पुरातत्व विभागसंग समन्वय र परामसश सुरु गर्दै छौ । हनुमन्ते खोलाको पानी पुनः सफा गरी प्रयोग गर्नका लागि वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टलाई पुनः उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ त्यसका प्राविधिकहरुसंग परामर्शको पहल भई रहेको छ ।
महिला हिंसा न्युनिकरणका लागि के कार्यक्रम छ ?
पहिले रक्सी खान्थे र श्रीमतीलाई कुटने अधिकार नै हो भन्ने मानसिकता व्याप्त थियो । तर अहिले शिक्षाको चेतनाले महिला हिंसाका खासै घटना छैन । डिर्भोसकै केस पनि धेरै कम छन् । नेवारी समाजको बाहुल्यता भएकोले पनि हुन सक्छ यहां महिला हिंसा कम छ । तर केही गरी पारिवारिक सम्बन्धमा विचलन आयो भने पनि हामी पार्टीगत हिसावले पनि मेलमिलाप गराउने तिर लाग्र्छौ । कतिका घर टुक्रिन बाट हामीले जोगाएका छौ ।
अन्त्यमा केही थप भन्न चाहनु हुन्छ ?
अहिले देश संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाबाट क्रमश स्थायित्व तिर लाग्दै छ । यस्तो बेलामा विकास कार्यमार्फत शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिन मानव संसाधनको जरुरत हुन्छ । तर्सथ युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न स्थानिय तहबाटै प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनु पर्छ । त्यसका लागि नेपालको एक आर्थिक श्रोत पर्यटनलाई प्रर्बद्धन गर्न यहांको सा्रस्कृतिक, ऐतिहासिक र सामाजिक सम्पदालाई प्रवद्र्धन र व्यवसायिकरण गर्न आवश्यक रहन्छ । शिक्षा र प्रावधिक ज्ञान, तथा विविध भाषाको ज्ञान मार्फत रोजगारीको सुनिश्चतता गरी यसको लागि आधारविन्दु तयार पार्न सकिन्छ । हरेक नगरपालिका लगायत स्थानीय तहको निकायले यस्तो नीति तथा योजना कार्यान्वयनकै तहमा ल्याउन आवश्यक छ ।
युवा संघका अध्यक्ष पौडेललाई खुला जवाफ